Kaominin’i Toamasina I Nanjavona avokoa ireo antontan-taratasy saropady
Araka ny angom-baovao teo anivon’ny kaominina izay mbola nohamafisin’ny filohan’ny delegasionina manokan’ny kaominina Razafimanana Jean Christian, tsy hita popoka ireo antontan-taratasy saropady sy sarobidy eo anivon’ny kaominina tamin’ny fandraisan’izy ireo ny asany avy.
Saika taratasy momba tany sy ny mpiasa ary fifanaraham-piaraha-miasa amin’ny mpiara-miombon’antoka avokoa ireto antontan-taratasy nanjavona ireto. Nanamarina izany raha teo ny zavatra hita nandritra ny fidiran’ny PDS ny birao fiasany niaraka tamin’ny vadintany fa tsy nisy na antontan-taratasy iray aza teo amin’ny latabatry ny ben’ny tanàna naato nandritra ny fidiran’izy ireo tao anatiny, na tao anatin’ireo vata sarihana samy hafa. Tsy hita koa ireo “disque dur” an’ireo solosaina tena miasa ho an’ny kaominina toy ny ny fitehirizana ireo fidiram-bola sy ny famoaham-bola ary ny fitantanam-bolan’ny kaominina eo anivon’ny tale misahana izany. Tsy hita koa ny “disque dur” mitahiry ny momba ny mpiasa sy ny tetikasan’ny kaominina rehetra ary ireo fiaraha-miasan’ny kaominina samy hafa. Raha ny fanadihadiana natao anefa dia tsy mbola nisy fitarainana trano vaky teo amin’ireo mpisahana izany na teo aloha na ankehitriny. Efa mandeha ny fanadihadiana.